'စာပို့သမားဟာအတော်လေး SEXY' - မိန်းကလေးများအားလုံးအိမ်တွင်သင်အထီးကျန်ဖြစ်နေမည့်အရာ ၁၂ ခု - သတင်း
'' စာပို့သမားရဲ့အတော်လေး sexy '' - သင်အားလုံးသည်မိန်းကလေးများအိမ်တွင်အထီးကျန်နေမည်ကိုကြားရသောအရာများ
ဒါကြောင့်မလွှဲမရှောင်နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်နည်းနည်းနေမကောင်းဖြစ်နေပြီးသင် Covid စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်သင်သွားခဲ့သည့်ထူးချွန်သောနိုင်ငံသားများနှင့်တူသည်။
၂၄ နာရီအကြာတွင်အပြုသဘောဆောင်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်အိမ်အတွင်း၌အိမ်သူအိမ်သားခြောက်ယောက်စလုံးနှင့်အတူ ၁၄ ရက်ကြာနေထိုင်ခြင်း၏အမှန်တရားမှာနစ်မြုပ်နေသည်။ သင်သည်အဆုံး၌မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ပါကအနည်းဆုံးအမှတ်ရစရာကိုးကားချက်များထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
သူကအသက် ၅၀ ရှိပြီ၊ ကလေးတွေနှစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ထားသလား။ ဟုတ်တယ်။ သူကသူ့ကိုနှစ်ပတ်အတွင်းသင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအထီးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။ ဟုတ်ကဲ့။
'OMG Rapid Response Hub ဟာကျွန်တော်ကိုအရမ်းစွဲလမ်းတယ်'
ထို ၁၄ ရက်အတွင်းသင်နှင့်သင့်မိခင်နှင့်သင်အဆက်အသွယ်ရလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးတော့မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုသူတို့စိုးရိမ်နေကြလား။
'ကျွန်တော်တို့ကို corona ပေးတဲ့အတွက် [ဒီမှာနာမည်ထည့်ပါ] ။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသင်ကူးစက်ခံခဲ့ရသူတစ် ဦး အားသင်အပြစ်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့မင်းကအဲဒါကိုကျပန်းတံခါးလက်ကိုင်တစ်ခုကနေဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့မုန်းတီးမှုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတာကပိုကောင်းတယ်။
'ကျေးဇူးပြု၍ TikTok ၏ကျော်ကြားမှုကိုရရှိနိုင်ပါသလား'
ယခုတူညီသောနံရံလေးခု၌သာကန့်သတ်ထားပြီး၊ သင်သည် TikTok ၏ကျော်ကြားမှုသို့သွားရန်အချိန်တန်ပြီဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သို့သော်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် TikToks လေးခုလုပ်ပြီးနောက်မည်သူကမျှဗိုင်းရပ်စ်မရှိတော့ပါ။
'' ယောက်ျားတွေငါ့ပြတင်းပေါက်ဆီကိုလာကြတယ်ကောင်မလေးအတိတ်လမ်းလျှောက်နေတယ်! '
ရုတ်တရက်လှေကားများကခြေခြောက်ချောင်းများနှင့်ပြည့်နေသည်။ floppy ကုလားကာများတပ်ဆင်ထားသောကောင်လေးတစ်ယောက်သည်လူတယောက်ကိုသတ်မှတ်ထားသောပြတင်းပေါက်နားတွင်စုရုံးနေ၏။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သူကိုကြည့်။ သူသည်သင်၏ခေတ်သစ် Rapunzel စိတ်ကူးယဉ်များကိုဖြည့်ဆည်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
'ငါလိုချင်တာအားလုံးသည် Pret silated oat milk latte'
ဝေးအားဖြင့်အိမ်တော်၌လူကြိုက်အများဆုံးထားသောစာပိုဒ်တိုများ။ သင်၏လစဉ် Pret စာရင်းသွင်းမှုသည်ဖြုန်းတီးခံရတော့မည်ကိုသိရုံဖြင့်မည်သည့်အရာမျှထိခိုက်မှုမရှိပါ။
'ငါ Tinder မှာလူမရှိတော့ဘူး'
သင်၏တစ် ဦး တည်းသောလူ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်အမျိုးသမီးအိမ်မြှောင်အိမ်သာများကိုသာကန့်သတ်ထားခြင်းကြောင့်သင်၏အမျိုးသားများသည်ယောက်ျားနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာဖန်သားပြင်မှကြည့်လျှင်သင်၏ရက်များသည် Tinder အပေါ်ပွတ်ဆွဲအားဖြင့်ပြည့်သွားသည်။
'' ယိုစီးမှု unclog လုပ်ဖို့ဘယ်သူ့အလှည့်ဖြစ်သနည်း '
'' မင်းတို့အားလုံး Draco Malfoy TikToks အသစ်ကိုတွေ့ပြီလား '
အထီးမျိုးစိတ်များ၏တည်ရှိမှုကို ထပ်မံ၍ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေသည့်စိတ်ကူးယဉ်ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်သည်အပူတပြင်းကာလကို ဖြတ်၍ သင်စတင်လေ့လာလိမ့်မည်။
'ငါအထီးကျန်နေတဲ့အခါ, ငါသည်သူ၏အဆွေခင်ပွန်း၏အိမ်အပြင်ဘက် Snapmaps ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သူ၏ခြေချောင်းအပေါ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အဲဒီမှာခုနစ်နာရီကြာထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်' '
'Finding Nemo ရှိအမာရွတ်နှင့်ငါးကိုစိတ်ကူးယဉ်သည်'
• Exeter Uni သည်သီးခြားခွဲထုတ်ထားသောကျောင်းသားများအတွက်£ 40 'ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်' ဖြစ်သည်
• 'ငါက TP ဘင်အတွက် peed': အားလုံးသင့်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံး Pre-Covid Exeter ဝန်ခံထွက်ည
•အကန့်အသတ်မရှိ Prosecco? ဟုတ်ပါတယ် ကျေးဇူးပြု၍ ။ Exeter ရှိအနက်ဆုံးမနက်လည်စာအတွက်လမ်းညွှန်
ဤရွေ့ကား 27 Gavin နှင့် Stacey ခရစ္စမတ်အထူး memes လုံးဝ crackin ''
ငါ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုရပ်တည်ပါ
Netflix ၏ချိန်းတွေ့မှုပြသမှုအသစ်တွင် 'Love on the Spectrum' နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ဖက်ရှင်ကျောင်းသားတစ် ဦး ကဖက်ရှင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးကြောင်းရှင်းပြသည်
'' 100 မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များ '' အစဉ်အဆက်အဆိုးဆုံးအရာဖြစ်၏
ဒီဆောင်း ဦး ရာသီမှာနွေးထွေးမှုကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံး Netflix ရုပ်ရှင်ကားများ
သင့်ရဲ့တရားမဝင် Wisconsin တက္ကသိုလ် - Madison အဘိဓါန်
Warwick BNOC ဘုန်းအသရေဖို့ခြေလှမ်း